Etu ị ga - esi lelee foto Hosying na LucidPix - LucidPix
Etu ị ga-esi mee foto Hoto, ya na LucidPix
Ka azụmahịa, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ji nwayọọ nwayọọ na-amalite iji usoro iwu ndị na-eme ka mmadụ ghara ịdị nkọ, ọtụtụ ụzọ njem ndị njem na ogige ntụrụndụ steeti na-aga n'ihu ịnabata ndị ọbịa mgbe ha mepere emepe. Ikkpụcha ije, ma ọ̀ bụ ihe ọchị ma ọ bụ maka mmega ahụ, bụ ụzọ zuru oke iji gbatịa ụkwụ gị ma sorokwa gị na-emekọ ihe n'udo mgbe izu ụka gasịrị. Oleekwa ụzọ kachasị mma iji cheta ịlaghachi ụwa nke dị n'èzí karịa ijide ya na foto zuru oke? Na blọọgụ blọọgụ anyị, anyị ga-atụle ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa iji wee nwee ike iji foto dị elu na foto LucidPix 3D.
ND #MỌD # 1: Were Foto Hiking N’oge Dawn ma ọ bụ Dusk
Site na ịkụ nzọ ụzọ n'isi ụtụtụ tupu ọwụwa anyanwụ, ma ọ bụ tupu ọdịda anyanwụ na mgbede, ị ga-enwe ike iji ọkụ "ọkụ elekere" foto gị. Ìhè elekere ọla edo na-eme ka foto gị dị ka nke na-ekpo ọkụ ma na-akpọbata karịa site na ịmegharị na-enweghị nhịahụ na-enweghị onyinyo siri ike na foto gị, na-eke ọdịiche mara mma na akụkụ. Ihe ndị a bụ njirimara dị mkpa dị mkpa ịnwe ya mgbe ị na-edepụta foto 3D. Uru ọzọ n’ịgbapụ n’oge ụtụtụ ma ọ bụ n’ụtụtụ bụ na a na-enwekarị ndị na-aga njem n’ụzọ a n’oge ndị a. N'ụzọ a, ị ga - enwe ike ịnwe nnwere onwe ịse foto ole ịchọrọ, n'enweghị ìgwè mmadụ.
Nke 2: Zere Distdọpụ Onwe Gị na Foto Gị
Na foto ị na-agagharị, isiokwu gị nwere ike ifu efu ngwa ngwa ma ọ bụrụ na nzụlite gị anaghị arụ ọrụ. Chọta ndabere siri ike ma ọ bụ mee ka isiokwu gị nwee agba mara mma ka isiokwu gị wee pụta na foto ahụ. Nwekwara ike tinye isiokwu gị na agba nke jikọtara ndabere gị. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ị na-aga n'ụsọ osimiri, were okwu gị mee oroma, ọ bụrụ n’ị na-agagharị n'oké ọhịa mgbe ọ bụla, were isiokwu gị ka acha uhie uhie. Nke a na -emepụta omimi agbakwunyere na foto 3D gị ma doo anya nzụlite gị na nhu ihu gị.
Nke 3: Gbanwee Echiche ikchọ ikchọgharị Gị
Mepụta echiche dị iche iche na foto gị site na ịmegharị akụkụ dị na foto gị. Kama iwere foto dị larịị, leda ala ma tụọ igwefoto gị elu iji nweta echiche ọhụụ. Nke a dị oke mma na isiokwu ndị siri ike, dịka osisi conifer. Onwere ogha di iche iche na echiche nile igha site na imeputa ihe omimi na foto 3D gi. Jiri foto a maka mmụọ nsọ!
NDMỌD # # 4: Họrọ Trazọ Ndị Dị Ihe Dị Mkpa na Foto
Thezọ kachasị mma iji nwee ọ enjoyụ na njem gị ma nweta nnukwu foto n'ihi nke a bụ ịga njem n'okporo ụzọ nwere njiri mara mma. Họrọ ụzọ ga - eduga na mmiri na - ezoghị ezo, na-enwe osisi toro ogologo dị ogologo n'ụzọ, ma ọ bụ na-ejedebe n'echiche. Ọ bụrụ na ịnọ na mpaghara San Francisco Bay Area, lelee anyị TikTok okpuru maka ufodu uzo eji eme njem Bay Area!
#bayarea #hikingtrails #bayareacheck #San Francisco #oakland #bayareatiktok #bayareathings #lucidpix # 3d #norcal # 3dphoto #goldengatebridge #ahia
Budata LucidPix maka gam akporo or Budata maka iPhone wee gbaa mbọ kesaa foto gị na ibe Facebook nke LucidPix maka ohere ịbanye na ha n’otu! Nwere ike kerịta ha Kachasị mma n'ime foto 3D nke LucidPix, LucidPix 3D foto na Facebook, ma ọ bụ na peeji nke 3D ọzọ otu Facebook!
Etu esi ewere foto 3D
Etu esi biputere Facebook 3D Photo enweghị Android ma ọ bụ iPhone na-akwado - Ntuziaka Nzọụkwụ
Uru 3D nke Photoslọ Ọrụ Gị
5 Atụmatụ iji nọgide na-arụpụta ihe mgbe ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ
Zọ kachasị mma iji weghara ogige ntụrụndụ mba →← Etu ị ga - eme Photoshop Camera Camera 3D
10 Omumaatu nke amamihe di na ndu nke ubochi anyi
Foto anụ ọhịa maka ndị malitere
Etu aga-eme GIF animimenti na 3 usoro dị mfe
5 Ndụmọdụ Maka Portmepụta Pọtụfoliyo Na-ese Onlinentanetị
Esi mepụta GIF na LucidPix